Hargeysa: Xiisaha Kulamada ka socda garoonka 31-ka May oo gebo-gebo ku dhow | Somaliland Post
Home Sports Hargeysa: Xiisaha Kulamada ka socda garoonka 31-ka May oo gebo-gebo ku dhow
SLpost Sports – Weli waxa si habsami ah uga sii socda garoonka 31-May tartanka bisha barakaysan ee Ramadaan oo ay ku hirdamayaan 20-kooxood.
Waxaana shalay la galay isreeb-reebkii loo loogu soo baxayay wareega afar afarta waxayna ciyaartii hore ku dhexmaray garoonka 31-May labada kooxood ee kala ah Kaafi iyo Saafari, ciyaartaas oo ay dawaashadeeda ka soo qaybgalay dadweyne aad u fara-badan, waxaanay ku bilaabantay weerar iyo weerar celis ay labada kooxoodba garoonka la soo galeen oo ay mid waliba ku dedaalaysay inay u soo gudubto afar-afarta.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayay labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar ay degaanaansho ku dheehantahay, ciyaartaas oo hafkii hore lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaaminayso kooxda Kaafi oo saxeexay laacibka Cabdiwahaab-yare.
Qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isugu soo noqday oo ay koox waliba tababaraheeda la soo tashatay ayay koox waliba awoodeed ciyaareed sare u sii qaaday, iyada oo dadweynihii ciyaarta ka soo qaybgalay ay aad u sii jeclaysteen daawashadeed, ayay waxay ciyaartaasi ku soo gebogabowday 1-0 ay guushu ku raacday kooxda Kaafi
Dhanka kale, waxay ciyaar aad u xiis badani ku dhexmartay garoonka 31-May kooxaha kala ah Cali Marshal iyo Alpha 2 University. Labada kooxoodba waxay soo bandhigay ciyaar aad u degan oo ay xamaasadi ku dheehantahay, ciyaartaas oo ay ka soo qaybgaleen dawashadeeda dadweyna aad u fara-badan oo ciyaarta aad ugu bogay habsami socodkeeda . Labada kooxoodba waxay soo bandhigeen ciyaar ah weerar iyo weerar celis. Ciyaartaasina waxay ku soo gebogabowday 3-1 ay guushu ku raacday kooxda AlphaUniversity.